စုံစမ်းကဒ်အပ် စုံစမ်းကဒ်အပ် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Semiconductor Probes များ
Soar Technology Co., Ltd ၏တဦးတည်းရှိခဲ့ စုံစမ်းကဒ်အပ် ထို့ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်သူများ, ပစ္စည်းတင်သွင်းသူများ, ဆန်တင်ပို့သူများအတွက် Taiwan။ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီအရည်အချင်းကိုကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အသင်းကအလုပ်ကို centralized စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုကိုထူထေ​​ာင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာလူ့-based စီမံခန့်ခွဲမှုပုံမှန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ, စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောအရည်အသွေးပြည့်စီးဆင်းမှုစတင်ရေး။ အဖွဲ့အစည်းကိုသင်ယူခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်န်ထမ်းများအလုပ်ကြိုးစားရန်အတူတကွစည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်း, ယုံကြည်ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်, အရည်အသွေးဦးစားပေး, oriented လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစိတ်ကူးနှင့်အတူကျနော်တို့ပိုကြီးပြီးအားကောင်းသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ဖောက်သည်ပိုတန်ဖိုးထမ်းဆောင်နိုင်, နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှပိုပြီးမြှုပ်နှံထား။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြ၏။
အကောင်းဆုံး စုံစမ်းကဒ်အပ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် စုံစမ်းကဒ်အပ် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ စုံစမ်းကဒ်အပ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
Tungsten သည်ဘိလပ်မြေကာဗိုက်၏အသုံးအများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်.အခြားသတ္တုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ,ပိုမိုခိုင်မာသည်,ခံနိုင်ရည်ရှိသည်,နှင့်လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်.အားလုံးစင်ကြယ်သောသတ္တုတို့တွင်,အဖြိုက်နက်သည်အရည်ပျော်မှတ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်.ကာဗွန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်,tungsten သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်တွင်အစိုင်အခဲအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်,နှင့် tungsten နိမ့်ဆုံးအပူချဲ့ထွင်ကိန်းရှိပါတယ်,အနိမ့်အပူချဲ့ထွင်ကိန်းနှင့်အတူ,အရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားသည်,ဆန့အားနှင့်မြင့်မားသောဆန့.ခွန်အား.များသောအားဖြင့် tungsten ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်,အသုံးအများဆုံးဖြစ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းကဲ့သို့အကြမ်းခံသတ္တုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း.Tungsten သည်အပူချိန်မြင့်မားသောသတ္တုပစ္စည်းများဖြစ်သည်.tungsten တစ်ဝါယာကြိုးသို့ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်ကတည်းက-ပုံသဏ္likeာန်လိုပဲ,tungsten ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုပြီး electrodes အဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်,ထိုကဲ့သို့သောနန်းကြိုးအမျှင်လေးများအဖြစ်,လျှပ်ကူးပစ္စည်း,thermocouples သို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဆေးထိုးအပ်,စသည်တို့.,သို့သော် tungsten ကိုယ်နှိုက်ကတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ်နိမ့်ခြင်းပြproblemနာသည်အသုံးပြုစဉ်အတွင်း၎င်း၏သက်တမ်းကိုများစွာလျော့ကျစေသည်.
ရီနီယမ်၏အစွန်အဖျား-tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုအထူးလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်.အပ်ကန်တော့ချွန်သည်မြင့်မားသည်,မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိနှင့် elasticity.ထုတ်ကုန်ကပိုအသုံး ၀ င်တယ်-ခံနိုင်ရည်ရှိသည်,နောက်ထပ်ချေး-ခံနိုင်ရည်ရှိသည်,နှင့်မျက်နှာပြင်အတော်လေးချောမွေ့သည်,နှင့်၎င်း၏တောက်ပရောက်ရှိနိုင်အလားတူမှန်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပါတယ်.ရီနီယမ်-tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအမျိုးအစားများကိုအများဆုံးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်,နှင့် rhenium ၏အသုံးပြုမှုအတိုင်းအတာ-tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးကတ်များတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်.ရီနီယမ်-tungsten ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် tungsten ၏ရောင်ခြည်ကိုလျော့နည်းစေပြီး၎င်း၏ပလပ်စတစ်ကိုတိုးတက်စေသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,ရီနီယမ်-tungsten သည်အရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားပါသည်,ဒါကြောင့်မကြာခဏလေကြောင်းနှင့်မြင့်မားသောအတွက်အသုံးပြုသည်-အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ,ထိုကဲ့သို့သောအီလက်ထရောနစ်အပူနှင့်ဂဟေအဖြစ်.
ဘီရီလီယမ်ဒြပ်စင်သည်အဓိကသတ္ထုစပ်အဖြစ်ဒြပ်စင်အဖြစ်ဘီရီလီယမ်ပါဝင်သောကြေးနီသတ္တုစပ်ဖြစ်သည်.၎င်းသည်ကြေးနီသတ္တုစပ်များတွင်အကောင်းဆုံး elastic material ဖြစ်သည်.စွမ်းအားမြင့်တယ်,မြင့်မားသော elasticity,မြင့်မားသောစီးကူး,မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ,ချေးခုခံ,အားကြီးသောပင်ပန်းနွမ်းနယ်,ခံနိုင်ရည်ရှိသည်,အအေးမိ-ခံနိုင်ရည်ရှိသည်,လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်,နှင့်ကြေးနီသတ္တုစပ်များ၏အကောင်းဆုံးခိုင်မာသောနှင့်အစွမ်းသတ္တိကို;ရှည်လျားသောများအတွက်အသင့်တော်ဆုံး-ဘဝ,မြင့်သည်-အပူချိန်,မြင့်သည်-လက်ရှိ switch ကိုအစိတ်အပိုင်းများ.ဒါဟာအသက်အရွယ်ပဲ-ပစ္စည်းခိုင်မာခြင်းနှင့် micro switch သည်,တိကျစွာ connector ကို,ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအဖြစ်တိကျသော shrapnel များအတွက်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုး-တန်းဆိပ်ကမ်းနှင့် relay များ.ဘီရီလီယမ်ကိုကြေးနီသည်အရွယ်ဖြစ်သည်-ကြေးနီသတ္တုစပ်တို့တွင်အမြင့်ဆုံးသောစွမ်းအားဖြင့်မာကြောစေသောပစ္စည်း.ဒါဟာတာရှည်အတွက်အသုံးပြုသည်-ဘဝဆိပ်ကမ်း,micro ခလုတ်များ,စသည်တို့.Beryllium copper ၏မာကျောမှုနှင့် wear ခံနိုင်မှုသည်ခရိုမီယမ်၏ဂုဏ်သတ္တိများထက်ပိုကောင်းသည်-ဇာကွန်နီယမ်-ကြေးနီသတ္တုစပ်.ဘီရီလီယမ်၏ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကိရိယာများသည်အလွန်ခဲယဉ်းပြီးသံမဏိမျက်နှာပြင်ကိုထိသောအခါမီးပွားများထွက်လာမည်မဟုတ်ပါ.ဘာရီလီယမ်၏ flexural မာကျောမှုမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်,အပူတည်ငြိမ်မှု,အပူစီးကူး,နှင့်သိပ်သည်းဆနိမ့်,ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လေကြောင်းလုပ်နေကြသည်-ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်းဒုံးကျည်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်,အာကာသယာဉ်များနှင့်ဂြိုဟ်တုများ.
P7-ပယ်လေဒီယမ်သတ္တုစပ်ကိုစမ်းသည့်အခါစမ်းသပ်အသုံးပြုသောမီဒီယာများကိုအသုံးပြုကြသည်.အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်စမ်းသပ်ပြီး pads များအကြားတိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်ချစ်ပ် circuit ကို၏အရည်အသွေးဆုံးဖြတ်ရန် tester သို့လျှပ်စစ်အချက်ပြထုတ်ပေး.အဆိုပါ cantilever စုံစမ်းစစ်ဆေး၏ပစ္စည်းနှင့်ဂဟေ pad ၏အဆက်အသွယ်ခုခံ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအောက်မှာ,အပ်၏မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်စမ်းသပ်ပြီးသည့်အခါပစ္စည်း၏ထိတွေ့မှုသည် tungsten needle နှင့် tungsten rhenium needle တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။;beryllium ကြေးနီအပ်သည်အပူချိန်မြင့်နေစဉ်.စွမ်းဆောင်ရည်အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်.P7-ပယ်လေဒီယမ်အလွိုင်းသည်အရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားပါသည်,အရာ intermetallic ဒြပ်ပေါင်းများ၏ပျံ့နှံ့ဖွဲ့စည်းရေးတားစီး.
။ ကျနော်တို့တကယ်ကမ္ဘာတစ်လွှားကတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း. တဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| Probe Card Needles	| 探針卡